शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निमार्णका लागी एकता - TV Annapurna
February 27, 2018 February 27, 2018 TV-Annapurna
ने.क.पा. (मसाल)को छैठौँ भेला हालै सम्पन्न भएको छ । त्यो भेलाको छलफल खालि दुईवटा एजेण्डाहरूमा मात्र सीमित रहेको थियो । प्रथम, हालै सम्पन्न चुनावको समीक्षा । द्वितीय, पार्टी अनुशासनको मूल्याङ्कन । ती दुवै विषयहरूमा भेलामा विस्तृत रूपले छलफल भयो । भेलाले हामीलाई दुईवटा जिम्मेवारीहरू दिएको छ ः प्रथम, शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गर्ने । द्वितीय, आठौँ महाधिवेशन सफल पार्ने । आगामी करिब एक वर्षका बीचमा हामीहरू ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टीभित्र देखापर्ने कमजोरी वा समस्याहरूका कारणले कम्युनिष्ट पार्टीको विकासमा बाधा पुग्नुका साथै देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू र सरकारहरूले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न, समाप्त गर्न वा क्रान्तिकारी दिशाबाट हटाउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएका छन् र गर्नेछन् । कैयौँ देशहरूमा उनीहरूले बलको प्रयोग गरेर कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई समाप्त गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । जस्तै कि इन्डोनेशिया । तर धेरै जस्तो अवस्थामा उनीहरूले नदेखिने प्रकारले वा छद्म प्रकारले पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई समाप्त पार्ने वा क्रान्तिकारी सिद्धान्तबाट विचलित गर्ने प्रयत्न गर्दछन् । कतिपय अवस्थामा उनीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमा घुसपैठ गर्ने पनि गर्दछन् – पार्टी भित्रका असन्तोष, अन्तर्विरोध वा कमजोरीहरूलाई उपयोग गरेर पनि उनीहरूले क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, त्यसमा फुट पार्ने प्रयत्न गर्दछन् । सी.आई.ए.ले संसारभरको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त गर्न त्यसरी प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा ‘र’ले पनि त्यसका लागि लगातार प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । वास्तवमा ‘र’ ले नेपालमा सबै राजनीतिक पार्टी, प्रशासन, सेना आदि सबैतिर आफ्नो घुसपैठ गर्ने कार्य गरेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र पनि त्यसले त्यस प्रकारको प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । तर त्यसले नेपालको कुन कम्युनिष्टभित्र कति घुसपैठ गरेको छ ? हामीलाई थाहा छैन । जे होस्, त्यस प्रकारका सबै सम्भावनाहरूप्रति पनि हामीले उच्च प्रकारको सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ ।
पार्टीको अनुशासनको समस्यालाई जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा नै हल गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्दछ । माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धतिको आधारभूत सिद्धान्त हो ः जनवादी केन्द्रीयता । पार्टीमा कैयौँ मतभेदहरू हुन सक्दछन् । पार्टी सदस्यहरूलाई मतभेदहरू राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ र त्यस प्रकारको स्वतन्त्रताको सधैँ रक्षा गर्नुपर्दछ । त्यो नै जनवादको सार तत्व पनि हो । त्यस प्रकारको स्वतन्त्रताको रक्षा गरेर नै पार्टीमा अनुशासन र एकता कायम रहन सक्दछ । लेनिनले मतभेद र एकताका बीचमा कसरी सामन्जस्यता कायम गर्ने ? त्यसका लागि छलफलको स्वतन्त्रता र काममा एकताको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन् ।
हामी अब आठौँ महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छौँ र यो महाधिवेशन नहुँदासम्म हाम्रो मुख्य ध्यान महाधिवेशनमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ । तर हामी महाधिवेशनको तयारीमा लागे पनि देशमा उत्पन्न हुने राजनीतिक समस्या वा आन्दोलनबाट अलग हुन सक्दैनौँ । महाधिवेशनको तयारीका बीचमा पनि संसदभित्र वा बाहिर सबै जिम्मेवारी वा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई आवश्यकतानुसार अगाडि बढाउने हाम्रो नीति र प्रयत्न हुनेछ । तैपनि मुख्य ध्यान महाधिवेशनलाई सफल पार्नेतिर नै हुनुपर्दछ । महाधिवेशनको तयारी पनि एक्लै अगाडि बढ्ने कुरा होइन । महाधिवेशनको सिलसिलामा पनि राजनीति नीति, कार्यक्रम आदि निर्धारित गर्ने, पार्टीभित्र तिनीहरूलाई स्पष्ट पार्ने वा उच्च रूपमा विकसित गर्ने तथा सङ्गठनात्मक अवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै जानु पर्दछ । त्यसरी शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण र महाधिवेशनको तयारी एक अर्कासँग अभिन्न रूपले जोडिएका कार्यहरू हुन् र ती दुवैलाई साथसाथै अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्दछ ।
गठबन्धन लचक बनेपछि फोरम सरकारमा, मन्त्रालय हेरफेर हुने
हाट व्यवस्थित गर्न भन्दै व्यापारीहरू आन्दोलनमा